व्यक्तिगतरूपमा समेत सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / व्यक्तिगतरूपमा समेत सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने
व्यक्तिगतरूपमा समेत सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने
Posted by: युगबोध in समाचार December 6, 2017	0 55 Views
रमे श लम्साल
काठमाडौ ं, १९ मंसिर (रासस)– कर्मचारी सञ्चयको षले व्यक्तिगतरूपमा समे त रकम जम्मा गर्न दिने सुविधा ल्याउन लागे को छ ।
रकम जम्मा गर्ने को संख्या बढाउने लक्षका साथ व्यक्तिगतरूपमा समे त रकम जम्मा गर्न पाउने यो जना सञ्चयको षले अगाडि सारे को हो  । को ष सञ्चालक समितिमा त्यससम्बन्धी प्रस् ताव पे श भइसके को छ ।
को षका निमित्त प्रशासक दीपक रौ नियारले सञ्चालक समितिको बै ठकले सो विषयमा आवश्यक निर्णय गरे पछि व्यक्तिगतरूपमा को षमा जम्मा गर्न पाउने मार्गप्रशस् त हुने जानकारी दिनुभयो  । को षमा हाल ६ लाखभन्दा बढीले को ष कट्टी गदैर् आएका छन् ।
स् वरो जगार, अनौ पचारिक क्षे त्रमा काम गरिरहे का नागरिक तथा निजी क्षे त्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समे त को षमा सहभागी गराउने लक्षका साथ नया“ कार्ययो जना अगाडि ल्याउन लागिएको रौ नियारको भनाइ छ । यसअघि निजी क्षे त्रका संस् थाले पनि दश जनासम्मका कर्मचारीको रकम को षमा जम्मा गदैर् आएका थिए । नया“ व्यवस् थापछि व्यक्तिगतरूपमा रकम जम्मा गर्न सकिने छ ।
नागरिक लगानी को षले दिएजस् तै सुविधा को षले पनि दिन लागे को हो  । को षको कूल बचत रकमलाई रु. सात खर्ब पु¥याउने लक्षका साथ अनौ पचारिक क्षे त्रमा काम गनेर् लाई समे त सहभागी गराउन लागिएको निमित्त प्रशासक रौ नियारले बताउनुभयो  ।
वै दे शिक रो जगारीमा रहे कालाई पनि सुविधा
को षले वै दे शिक रो जगारीमा रहे का नागरिकलाई समे त को षको सदस् य बनाउने र रकम जम्मा गर्न प्रे रित गनेर् लक्ष राखे को छ । हाल औ पचारिक र अनौ पचारिकरूपमा गरी दे शका करीब ४० लाख युवा वै दे शिक रो जगारीमा छन् ।
वै दे शिक रो जगारीमा रहे का युवाले पठाउने विप्रे षणलाई बचत गर्न प्रे रित गनेर् लक्षका साथ त्यस् तो यो जना ल्याउन लागिएको हो  । विप्रे षणबाट प्राप्त रकम अनावश्यकरूपमा खर्च भइरहे को र जताबाट आयो उतै जाने अवस् थाको अन्त्यका लागि त्यस् तो यो जना अगाडि सारिएको रौ नियार बताउनुहुन्छ ।
विदे शबाट आउने रकमलाई सो झै को षमा जम्मा गनेर् वा घरपरिवारका सदस् यले नजिकका कार्यालयबाट जम्मा गर्न सक्ने गरी सहज कार्यविधि बनाउने तयारी छ । बूढे सकालमा निवृत्तिभरणको रूपमा समे त उक्त को षमा जम्मा गरिएको रकम खर्च गर्न सक्ने गरी यो जना तयार पारिएको को षले जनाएको छ ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटे डले ‘रे मिट्यान्स हाइड्रो ’को अवधारणा सो ही प्रयो जनका लागि अगाडि सारे को हो  । रे मिट्यान्स हाइड्रो कम्पनीमार्फत हाल ताप्ले जुङमा घुन्सा खो ला जलविद्युत आयो जना ७१.५ मे गावाट र सिंबुआ खो ला ५३.७ मे गावाट क्षमताका आयो जना निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने यो जना छ । वै दे शिक रो जगारमा रहे का नागरिकले कमाएको रकम सदुपयो ग हो स् भन्ने तर्फ को षले ध्यान दिन थाले को छ ।
विप्रे षणबाट प्राप्त रकम अनुत्पादनशील क्षे त्रमा बढी खर्च भइरहे को छ । त्यसलाई रो क्ने उपाय बचत गनेर् बानीको विकास गनेर् र लगानीका अवसर सिर्जना गनेर् लक्षका साथ यस् तो अवधारणा ल्याइएको हो  । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुमपा रह“दा रौ नियारले नै रे मिट्यान्स हाइड्रो को अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो  । सबै वर्ग तथा क्षे त्रका नागरिकलाई रकम जम्मा गर्न पाउने सहज व्यवस् था भएपछि को षको कूल बचत सात खर्ब पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
ने पालको हालको कूल बजे ट बराबरको पू“जी बनाउने लक्षका साथ को षले कार्ययो जना अगाडि सारे को रौ नियारले बताउनुभयो  । आगामी दिनमा सबल र सक्षम आर्थिक संस् थाका रूपमा को ष अगाडि बढ्नुका साथै मुलुकको आन्तरिक लगानीमा विविध स्रो त तथा आयामका बारे मा सहज मार्ग निदेर् श गनेर् छ । को षले ने पाल वायु से वा निगमलाई विमान खरीदमा मात्रै रु. २० अर्ब लगानी गरिसके को छ ।
यस् तै माथिल्लो तामाको शी, सान्जे न, रसुवागढी र मध्य भो टे को शीमा समे त लगानी गरे को छ । यस् तै अन्य विविध परियो जनामा रु ३३ अर्ब लगानी गरे को छ । को षले एक खर्ब ३७ अर्ब व्यक्तिगत तथा अन्य क्षे त्रमा लगानी गरे को छ । कूल ५४ अर्ब रकम भने विभिन्न बै ंक तथा वित्तीय संस् थामा मौ ज्दात छ ।
Previous: पैसा नहँदा रोकियो विवाह र गिनिजको सपना
Next: चुनावका लागि घर फर्किने को लर्काे